Farmaajo”Waxaa jira Taliyayaal hab siyaasadeed lagu dalacsiiyay ”+COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Farmaajo”Waxaa jira Taliyayaal hab siyaasadeed lagu dalacsiiyay ”+COD
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay hanaanka loo maro dalacsiinta Saraakiisha Ciidamada oo mararka qaar dhaliilo waaweyn laga keeno.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Farmaajo in horay u jirtay in xilliyada qaar Xildhibaano ka faa’iideysanaya xaalada adag ee Siyaasadeed ee markaas taagan in ay keensadaan askarta iyo saraakiisha ay rabaan in darajooyin loo xiro si ay culeska siyaasadeed u yareeyaan.
Waxa uu hadalkiisa intaasi raaciyay in mararka qaar la arkayo Nin shalay ahaa xidigle,isla markaana leh Xildhibaan firfircoon uu Maanta yahay Sarkaal weyn oo la dalacsiiyay waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu soo hadal qaaday in saraakiisha iyo ciidamada aysan kala amar qaadan mararka qaarkood taasina ay ku dhacdo in saraakiisha sifo sharcidarro ah looga laga sare mariyo askartooda taasina ay keento in sarakiishu aysan amarada qaadan.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayuu sheegay in taasi ay ka gudubtay,isla markaana Albaabada laga xirtay,Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada doonaya inay fursada siyaasadeed uga faa’iideystaan in Askar ay wataan loo dalacsiiyo.
Marka laga soo tago hadalka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadana Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka aad loo dhaliilo wadooyinka loo maro dalacsiinta Saraakiisha iyo askarta dowladda Soomaaliya.